Nidina ifotony nijery ny olan’ireo mponina ao amin’ny fokontany Mananjara izay ao anatin’ny boriborintany misy azy ny tenany nihaino ny hetahetam-bahoaka. Itarainan’ireo fokonoloana ny lalana, fandriampahalemana ary ny rano mihandrona tsy misy fivoahany. Ireo beantitra izay nihaona taminy dia nangataka ny hijerena azy ireo akaiky, indrindra ny fakana ny fisotroan-dronono sy ny maha olona amin’ny fampiasana karatra maitso. Nisy ny fanampiana ireo beantitra miisa roan-jato ao amin’ny fokontany Andrefan’i Mananjara, toy ny vary sy menaka. Ireo mpanasa lamba ihany koa dia notolorana savony sy borosin-damba entina hanamaivanana ny asan’izy ireo. Ny fotodrafitrasa ao amin’ny biraom-pokontany dia hasiana fanamboarana toy ny varavarankely ary ny valin-drihana. Hohavaozina ny trano ho an’ireo mpitandro ny filaminana dia ny tobin-janaparitra (poste avancé) ho an’ny polisy hanatsarana ny fandriampahalemana. Nisy ny fizarana takamoa apetraka hanazavana ny tanàna iarahana miasa amin’ny JIRAMA.